kurudyi kona gearbox diki kurudyi kona gearbox, kurudyi kona gearbox rakachipa
chidiki chekona chekona bhokisi rekugadzira pamutengo wakanyanya
Chii chinonzi Tsananguro YeRudyi-Angle Gearbox?
Ona Mhando dzeGiyaTaura nesu
"Right angle gearboxes anoonekwa neidi rekuti drive shaft uye chakabuditswa shaft chakarongwa pakona yeanosvika 90 degrees. Zvichienderana nerudzi rwebhokisi remahara, mademo anogona kupindirana mundege kana kuyambuka nendege mbiri dzakafanana, izvo zvinoguma zvaiswa muhombe. " dhiraivha iri mukati mutserendende 1. Iyo helical gear iri mukati asi inogona kunge iri chaiyo-kona yekutyaira
Tarisa uone zvatiri kukupa iwe
Isu tinogadzira mizhinji yepamusoro torque kurudyi magear mabhokisi uye rimwe nerimwe rawo rinopa mweya wakakwana kune akawanda mapurojekiti einjiniya sekusimudza system, kusanganisa marasha, mapampu uye nezvimwe.
Diki kurudyi kona yegiya gearbox neCrown Gears bevel inogadzirwa kuti ivimbike, hupfumi kuendesa yakakwira rpm kumhanya kana simba. Dzimwe dzinogona kunge dziri kurudyi angle gearbox ine reverse.Right angle gearbox muindia ine kumwe kusimuka kubva kuChina uye idzi premium 90 ° giya dzinodzora dzinoenderana uye dzinoshanda zvine hunyanzvi, dzakanyarara dzinoshanda dzakatenderera bevel magiya, kurudyi kona simba kufambisa.
Iyo H inoteedzana kurudyi kona bhokisi nebhokisi rakatwasuka rakabatana zvakananga neyekutanga mover senge injini yemukati yekubatanidza, mota yakatenderera uye gasi turbine. Mushure mekumhanyisa kuderedzwa (kana kuwedzerwa), iyo magetsi anobvisa kubva padura remberi. Iyo inogona kumira ne axial thrust uye inoshandiswa kuperekedza uye kusimuka kwepombi tsime pepombi, axial inoyerera mapombi, diagonal kuyerera pombi, refu shaft pombi, mvura yakadzika mapombi uye mamwe akasiyana evertical shaft anoshanda mashini.
Kutonhora fani dhiraivha, diki kurudyi angle gearbox, yakakwira torque kurudyi angle gearbox, kurudyi kona gearbox enda kart, kurudyi kona kona simba kutapurirana
Diki bevel gearbox, kurudyi angle bevel gearbox, spiral bevel gearbox, yakakwira torque bevel gearbox, kaviri bevel gearbox, bevel gear drive
Peerless kurudyi kona bhokisi
kurudyi giya bhokisi rezasi kwekunze gwenzi, isina gearbox, isina 1100 kurudyi kona gearbox, peecher tecumseh
Kutonhora nhare gearbox
Maindasitiri kutonhora shongwe fani dhiraivha, kurudyi angle gearbox yakachipa mutengo, kurudyi angle drive giya bhokisi
Planetary Type, 90 degree gearbox, kurudyi kona gearbox rakachipa mutengo, kurudyi kona drive gearbox
kurudyi kona gear rekudzorera, yakakwira rpm kurudyi kona gearbox, yakakwira torque kurudyi kona gearbox
Bevel Gear Rudzi, kurudyi kona kona simba kutapurirana, hombe kurudyi angle gearbox, kutonhora shongwe gearbox
Kadiki kurudyi kona bhokisi
Bevel Gear Type, kurudyi kona simba rekutakurisa, yakakura yekumusoro giya bhokisi, yakakurumidza kumhanya 90 degree gearbox
Kona yekuderedza kudzora
giya rekudzora, shaft inokwidzidzirwa kumhanyisa speeder, 300 hp kurudyi kona bhokisi, inomhanya yekudzora yemagetsi mota.
Kutonhora fan gearbox
Kutonhodza fan gearbox, kurudyi angled anotyaira, maindasitiri kurudyi angle gearbox, Kutonhora fan fan
Kona yekutyaira gearbox
Worm Gear Type, diki kurudyi kona madhiraivha, maindasitiri kurudyi kona bhokisi, angle gear drive
Right angle gearbox yekutengesa kubva kuSogears Kugadzira
Yedu kurudyi angle gearboxes uye ekumhanyisa anodzoreredza mamiriro-e-iyo-e-anoshanda anoshanda gearing, aine akasiyana siyana ekumisikidza masisitimu uye zvishongedzo kukodzera muchina wako. Iine modular dhizaini yakavakirwa pamubhiti dzimba ine mweya inonamira mabhero uye magiya kubva ku0.5 kusvika 56: 1 inosvika masimba e500 HP. Inogona kushandiswa zvakanyanya mumapurojekiti ekuchengetedza mvura, mainjiniya enjiniya, kuchera metallurgic, petrochemical, moto uye mainjiniya emumvura uye mimwe minda.
Iine mhando dzakasiyana dzemhando uye huwandu hwekutakurisa, inogona kusangana nezvinodiwa zvekumusoro uye zvakaderera kumhanyisa prime movers uye michina inoshanda, uye kukwanisa kumira kune akamira axial mauto, ayo akarerutsa chimiro chemashini anoshanda. H-Series kurudyi kona mabhokisi emabhokisi anowanikwa mune dzakasiyana siyana dzekushandisa, inodhura-inoshanda, yekuchengetedza nzvimbo uye yakakodzera kune akasiyana mamiriro emamiriro ekunze.
Kune chero chemubvunzo ndapota taura nesu kuburikidza neiyi fomu
Endesa Rugwaro Rwako